Citroen / Peugeot အတွက်အဝေးမှသော့ချက်
ယခု BMW F စီးရီးအသစ်တွင်စနစ်နှစ်ခုဖြင့် CAS4 နှင့် FEM / BDC စနစ်တို့ပါရှိသည်။ CAS4 Anti-Theft Programme ၏နည်းလမ်းနှစ်မျိုး။ အစောပိုင်းနှစ်များတွင် CAS4 မှချမှတ်သောပရိုဂရမ်မာအက်ကွဲခြင်းအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးအများစုသည်မျက်နှာသာပေးလျက်ရှိသည်။ ပရိုဂရမ်မာသည်၎င်းချစ်ပ်ကိုကြိမ်နှုန်းမြင့်ကြားခံများမှတစ်ဆင့်အက်ကြောင်း ...
ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ကားအားလုံးသည်တူညီသောစတင်သည့်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုကြသည်။ မီးအားနှင့်အင်ဂျင်ကိုစတင်ရန်စက်နှိုးသည့်ခလုတ်အားဖြင့် power supply ကိုစတင်သည်။ သို့သော်ကားမော်ဒယ်ပေါ် မူတည်၍ ခလုတ်ကိုထိန်းချုပ်သည့်နည်းလမ်းသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာရိုးရာနည်းလမ်းကိုသော့ထည့်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသည်။
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူထိုလူသားပုံသဏ္ationsာန်များသည်ကားကိုဝေးလံခေါင်ဖျားသောနေရာမှမြင်နိုင်သောပြtroubleနာများစွာကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ အစောဆုံးကားသော့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်သော့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကားတံခါးကိုသော့တစ်လုံးထဲကိုသော့ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည် ....
ပထမဆောင်းပါး - ကားသော့၏အဓိကအလုပ်လုပ်ခြင်းနိယာမ။ ကားအတွင်းပိုင်းခေတ်မှီအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများအနက်စမတ်သော့စနစ်သည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ keyless entry technology သည်အလွန်အဆင်ပြေလွယ်ကူစေပြီး one-key start တစ်ခုသည်နည်းပညာကိုအပြည့်အဝနားလည်စေပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပြောင်းလဲခြင်းမှပိုမိုကုန်ကျသည်။
Tiguan မီတာအတွက်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနည်းလမ်း“ သော့မတွေ့”
ကားကိုကားဂိုဒေါင်တွင်ရပ်ထားပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်အဘယ်ကြောင့်မစတင်နိုင်သနည်း။ သို့သော်ဤအချိန်တွင်ခလုတ်ခုံသည်“ anti-theft system activated” ကိုပြမထားသော်လည်း“ key not found” ဝေးလံခေါင်ဖျားသောသော့သည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကားကိုရှာမတွေ့ပါ။ ပြသနာကဘာလဲ? ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးပြီးနောက် ...
Tiguan၊ Touareg, Q5, GOLF, Magotan ဗားရှင်း ၄ ခု၊ ၅ ခုအတွက် Anti-Theft ဖယ်ရှားရေးနည်းလမ်း
Volkswagen နှင့် Audi 4th နှင့် 5th generation anti-theft ဖျက်သိမ်းခြင်းများတွင် Volkswagen CC, Magotan, Sagitar, Passat, Tiguan, Touareg 3.6L, Golf 6, Sharan, Audi Q5, A4L နှင့် A6L စသည့်မော်ဒယ်များစွာပါဝင်သည်။ Bosch MED17.X, MEV17.X, ECD17.X စီးရီးကိုအသုံးပြုခြင်းအနေဖြင့်၎င်းတို့သည် anti-theft ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
လူတွေရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းကအမြဲတမ်းတိုးတက်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ဘဝစည်းချက်ဟာမြန်တယ်။ ဤကိစ္စတွင်အချို့သောသူများသည်အထူးသဖြင့်မသေချာသောအရာဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ထွက်သွားသည့်အခါသူတို့၏အိမ်ပိုက်ဆံအိတ်များသို့မဟုတ်အရာများကိုအိမ်တွင်မကြာခဏစွန့်ခွာလေ့ရှိသည်။ သင်ဤသေးငယ်သောအရာများကိုမေ့သည်ဆိုလျှင်အရေးမကြီးပါ၊ သို့သော်ကားသော့ကိုသော့ခတ်လျှင် ...
သင်ကားသော့ပျောက်လျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ များစွာသောကားပိုင်ရှင်များသည်ဤပြproblemsနာများကြောင့်စိတ်ပူပန်ကြသည်။ ကားအသစ်ကိုပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာသော့နှစ်ချောင်းရှိတယ်။ ပျောက်ဆုံးသွားသောတ ဦး တည်းတွင်သော့အပိုရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း အကယ်၍ အပိုသော့တစ်ခုလည်းပျောက်သွားပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ထိုအခါသင်သော့ကိုက်ညီရန်ရှိသည်။ ဒီနေ့ငါဝေးလံခြင်းနှင့်မည်သို့ကိုက်ညီရန်သင့်အားပြောပြလိမ့်မည် ...
ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေကြမ်းများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် - ကုန်းတွင်းသမိုင်းကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ချက်နှင့်ကမ်းလွန်ပြန်လာမှုလက္ခဏာများ ပြည်သူ့ဘဏ် China_Sina Finance_Sina.com
20-12-03 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
ပုရွက်ဆိတ်အုပ်စုကဒီမှာပါ။ အောက်တိုဘာ ၂၉! ယခုအကောင့်ဖွင့်ပြီး ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ပြင်ပါ။ [အစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်နှင့်ဘဏ်ဖွင့်ခွင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုချက်ချင်းယူပါ။ 】ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေကြမ်းသည်တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ်မှထုတ်ပေးသောရေတိုငွေချေးစာချုပ်ဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရန် repair station ကိုနှိပ်ပါ။ အသစ်တစ်ခုကိုပြုပြင်ခြင်းစခန်းကိုတပ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်ပါကယာဉ်နှင့်ပိုင်ရှင်၏ ID ကိုသင်လိုအပ်သည်။ မတူညီသောမော်ဒယ်များအရ၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးစခန်းသည်ပိုင်ရှင်သည်ပြင်ဆင်မှုသော့အတွက် ၁၇- ဂဏန်းဆန့်ကျင်ခိုးယူမှုစကားဝှက်ကိုတောင်းခံရန်လိုအပ်သည်။ T ...
ကားသော့သည်လျှို့ဝှက် function လေးခုရှိပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်အသက်များကိုကယ်တင်နိုင်သည်
တက္ကစီတံခါးကိုသာဖွင့်ရုံကားအများစုသည်အဝေးထိန်းခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါမှအပေါက်တံခါးကိုသာဖွင့်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုနှစ်ကြိမ်နှိပ်ပြီးနောက်မှသာတံခါးအားလုံးကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ယာဉ်မောင်းအချို့သည်ကားကိုအဝေးမှကားရပ်။ ခေါ်ကြသည်။ တက္ကစီတံခါးကိုသာဖွင့်လိုက်လျှင်လူဆိုးများကိုကားပေါ်မှမဆင်းရန်တားဆီးနိုင်သည်။
အော်ဒါမှာယူခြင်းသင်၏အကောင့်ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပါ - ၀ င်ပါ။ ပစ္စည်းအရေအတွက်ကိုလှည်းထဲသို့ထည့်ပါ - တင်သွင်းပါ (ထွက်ခွာပါ။ ) - အရောင်းသမားကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှု ၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကားသော့အမျိုးမျိုး၊ transponder ချစ်ပ်များ၊ အဓိကပရိုဂရမ်မာများ၊ , စသည်တို့ကို 2.Any မေးမြန်းခြင်းဖြေကြားလိမ့်မည် ...